Semalt: Nyore Tricks Kudzivirira Mafaira Azvo Nezvikamu Kubva Mazvirwere Zvirwere
Kushanda pasina kushungurudzika kwekuchengetedza kuchaita kuti data yevashandisi inopererwa nevanyengeri. Dunhu rega rega rinoratidzirwa kune malware chero bedzi sezvo chigadzirwa ichibatanidzwa kune network. Zvakakosha kushandisa chigunyanisi neuchenjeri kudzivisa dambudziko rinogona kutungamirira data kune jeri rakavharidzirwa.
Munyaya ino, Jack Miller, Semalt Mutungamiriri Mukuru weVatengi vanobudirira, anotsanangura nzira dzinotevera dzekudzivirira malware pane zvishandiso:
Chinonyanya kukosha, nokuda kwezvigadzirwa zvemasasa zvinoshandiswa zvebhizimisi uye zvinangwa zvevanhu, vashandisi havafaniri kuisa chero ipi zvayo inofungidzirwa isingabatsiri. Isai zvidzidzo chete zvinopiwa nekodzero - togel keluar hongkong kemarin. Kana pane chido chakasimba chekuisa mapurogiramu akadaro, shandisai pazvigoni zvisina kushandiswa pamabasa ebhizimisi. Sezvo zvakadaro, kana malware isingavhiringidziki, haigoni kuchinja dambudziko rinokosha uye chete kuburikidza nekugadzirisa chigadzirwa kune zvigadzirwa zvekudyara ndizvo zvose zvinodiwa.
Chechipiri, kugadziridza nguva dzose yehutori ndicho chinhu chikuru chekuchengetedzwa kwezvigadzirwa zvinorwisana nemarware. Muzviitiko zvakawanda, zvinoshandiswa zvinosanganisira kusungirwa kwemhosva. Kazhinji chengorora zvigadziriswa pane zvese zvakagadzirwa pamwe chete nepuratifomu. Nguva ipi zvayo zvinyorwa zviripo zviripo, teerera uye uise kana kuvamhanya pakarepo. Nezve desktop kana laptop, kuiswa kwe untrusted software kunodzwa mwoyo..Nenguva isipi, mapuratifomu ese ave neavo pachake anochengetedza. Linux, Apple, Windows uye iOS mapuratifomu. Kana ukashanda pane mahwindo, ingoisa chete kubva pane zvakasikwa. Kana ukashandisa Linux, shandisa kubva kumushandi wemapuraneti. Mukuita izvi, hazvikwanisi kupindira mune malware. Uyezve, zvinyorwa zvinonyanya kukosha pane zvesktop / laptop maitiro ehutano. Nokuda kwemahwindo ewindo, nguva refu inomirira apo kuvandudzwa kunoonekwa nguva yekupera, asi zvinodiwa. Chengetedza chero zvinyorwa zvinoshandiswa zuva rega rega sezvo zvisingabvumirwi kushanda panzvimbo isina ngozi. Kushanda nemahwindo ewindo kunoshandisa kushandiswa kwezvinorambidza malware kana antivirus su
ch se windows windows defender, Avast, uye AVG. Dhiyabhorosi iri pangozi kana kudzivirirwa kwakadaro kusingashandisi.
Chechitatu, vashandisi vanorayirwa pamusoro pekutsvaga mazano kubva kune zvisizvo zvisingazivikanwi. Software yakaipa inogona kumanikidzwa kuenda pachikuva ne URL imwe chete. Usanyorera maimeri anogamuchira kubva kune zvisingazivikanwi kusvikira iwe uchitarisa kuMarware Domain List. Kana imeyiri inogamuchirwa ichitaura kuti chimwe chinhu chakashata chakaitika kune imwe yenyaya dzako uye kuti iwe unofanira 'kutanidza chibatanisi chiri pasi uye udzoke zvakare mu akaunti yako kugadzirisa nyaya yacho,' kuvhara mutsara pamusoro pekubatanidza uye ona kuti chii chaizvoizvo chiri kutarisa to. Mikana yakakwirira ndeyekubiridzira.
Pakupedzisira, mamwe mazano anogona kubatsira mumwe kunze kwezvinonyanya kukosha ndeye: kuchengetedza data, kusambobvumira musikana wacho kuchengetedza mapepwords ako kana chero ruzivo. Kuwedzerwa, pavanenge vachishanda pamwe neshanduro mune incognito mode kana network isina kuchengeteka, munhu anoshandisa internet anofanira kufunga nezvekushandisa VPN (Virtua Private Network). Nokudaro, kuvimba nemuumbi wezvigadziri chete kwekuchengeteka hakusi kuchenjera. Chero ani zvake anoshandisa inofanirwa kutora kuchengetedzwa kwedheta yavo uye chikwata mumaoko avo, basa uye kushandisa zvishandise zvakanaka. Paunenge uchingwarira, iyo data ichachengetedzwa kubva kune yakaipa yemagetsi.